2007-04-13 @ 08:38 in Kolontsaina
Amin’izao fotoana izao moa dia misy ny fihetsiketsehana momba ny sarimihetsika malagasy. Fantatry ny rehetra fa miroborobo tokoa ity sehatra ity amin’izao fotoana izao na dia tsy azo atao aza ny mampitaha azy amin’ny an’ny frantsay na indrindra ny amerikana. Sakay malaho sy havozo, hoy ny fitenenana izay, ka samy manana ny hanitra ho azy.
Hevero anie ny sarimihetsika avoakan’i Bollywood any India. Tsy dia betsaka na dia mety hisy aza no hahalala izay sarimihetsika avoakan’ity faritra ity. Nefa dia tena mahazo vola tokoa ny mpilalao sarimihetsika amin’ity toerana ity. Inona ny antony ? Betsaka ny karana ary zavatra mifandraika amin’ny zava-misy na foto-pisainany no tena mivoaka any. Manana ny tsenany izy izany ary ny karana ihany koa anisan’ny mponina betsaka eto ambonin’ny tany. Tahatahaka izany ihany koa ny sarimihetsika malagasy fa tsy tahaka ny an’ny amerikana tiana halaza manerana izao tontolo izao. Marina kosa fa tena vitsy ny malagasy sy ny mahay teny malagasy ary mametra be dia be ny sarampandaniana amin’ny fanaovana sarimihetsika iray izany. Io matetika no antony ahenoana hoe roa volana dia vita ny sarimihetsika iray.
Tahaka ny nofinofy kosa izany hanafika ny tsena tandrefana izany afa-tsy hoe tandrefana no mpanatontosa ny tantara ary mifanaraka tsara amin’ny tontolo sy fisainana na kolontsaina tandrefana no avoaka na farafaharatsiny manintona olona maro ny zavatra avoaka. Nefa raha hanintona ny tandrefana ataoko fa ny horonantsary fanadihadiana no tena mety amin’izany fa tsy ny horonantsarimihetsika ilalaovana kosa.
Izaho aza mahatsikaritra fa raha misy oronana somary tsaratsara izay vitan’ny firenen-kafa na iza na iza ka hitan’ny Amerikana US iny dia tsy ho iny sarimihetsika iny mihitsy no alefany any Etazonia fa amboariny indray mandeha iny. Manao sarimihetsika hafa mihitsy izy nefa dia iny tantara iny mihitsy no averiny. Angamba tsy tiany loatra ilay fihetsiky ny molotra sy ny teny tsy mifanaraka loatra. Isika mpiteny amin’ny teny hafa moa dia miaritra mihaino fotsiny rehefa tsy maharaka ny fihetsiky ny molotra.
Sahala amin’ny an’ny rehetra ihany koa ny sarimihetsika malagasy. Misy noho ny fananany fitaovana fotsiny dia te-hamoaka izay vetsovetsom-pony ka maharikoriko mihitsy ny mijery azy. Misy kosa ny miezaka hampakatra ny sandan’ny vita malagasy ary ankasitrahana ny zavatra ataon’izy ireo. Dia misy karazany toy izany tokoa na dia ireo sarimihetsika ampidirina hisafidianan’ny olona aza. Ao anatin’ity fihetsiketsehana miaraka amin’ny rta ity no hisafidianan’ny olona izay sarimihetsika tsara, sy mpilalao mendrika ary mpanatontosa mahafatra-po, izaho avokoa no mametraka izany anarana izany fa teny frantsay moa no tena hanaovana azy amin’ny teny hoe meilleur.
Sarimihetsika sivy no isafidianana ary mpilalao vitsivitsy tsy ary ho tadidiko anarana aby no tena arahimaso. Ny hany fantatro moa dia ry Volatiana, ry Mija ary ry Akomba mazoto. Tsy hampita vaovao loatra no tena tiako atao fa ny hiteny izay tsikaritro fotsiny. Misy mandritra ny fanodinana no tsy miova akanjo mihitsy ny mpilalao (poabasy intelo) nefa misy hoe iray volana aty aoriana sy herintaona aty aoriana. Misy ny tsy mety tsara ny sary na ny feo, mazava loatra sy migobogobona fotsiny. Ao moa ny vao manomboka fotsiny ny tantara dia efa fantatra sahady ny farany. Io moa dia noho ilay hoe sarimihetsika malagasy e ! atao misy fananarana izany matetika.
Fa ny sarimihetsika notontosain’i Volatiana sy nilalaovany hatramin’izao aloha no hitako hoe mety indrindra na dia manana ny lesoka ihany koa aza izy io. Io sarimihetsika io moa no nataoko lohateny eto. Ohatra : lasa nivoaka ny efitrano fihinana tsy nandoa vola i Tiavina (Volatiana) rehefa nihetsi-po be loatra. Misy ny sehatra tokony ho fohifohy kokoa no nohalavaina amin’ny tsy misy dikany. Be loatra ny fihinanana na fisotroana, tahaka ireny sarimihetsika frantsay ireny e ! na izany aza dia misy ihany koa ny tombo ananan’ity sarimihetsika ity. Tsy nampoizina ny fiafaran’ny tantara ka nahatonga ny sasany niteny hoe tsy tiany fa tsy misy tsoakevitra loatra. Tsy voatery no ny tsara hatrany manko no « mandresy » amin’ny farany na atao hoe tsara fiafara ny tantara. Notontosaina tany amin’ny tanànan’i Toamasina ity sarimihetsika mitondra ny lohateny hoe sarangotra ity ary niafara teto Antananarivo ihany. Farany tsy zaza loatra aho ka hitantara aminareo izay fiafarany tao.